समाचार - स्क्रू र बोल्ट बिच फरक र स्क्रू र बोल्ट बीच अपरेशन फरक
बोल्ट र स्क्रू बीच दुई भिन्नताहरू छन्:
१. बोल्टहरू साधारणत: पागलसँग संयोजनको रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ। स्क्रूहरू आन्तरिक थ्रेडको म्याट्रिक्समा सिधा स्क्रू गर्न सकिन्छ;
२. बोल्टहरू पक्रिन र कडा दूरीका साथ लक गर्न आवश्यक पर्दछ, र स्क्रूको लक गर्ने शक्ति सानो छ।
तपाईं टाउकोमा खाका र धागो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
टाउकोमा ग्रुवहरू ठूलो स्क्रू र ड्रिल टेल तारको रूपमा निर्धारण गर्न सकिन्छ, जस्तै: एक शब्द ग्रूव, क्रस ग्रूव, भित्री हेक्सागन आदि बाह्य हेक्सागन बाहेक;
हेड बाह्य थ्रेडको साथ स्क्रूहरू जुन वेल्डिंग, रिभेटिंग र अन्य स्थापना विधिहरू द्वारा स्थापना गर्नु पर्छ स्क्रूको हो;
स्क्रू थ्रेड ट्यापिंग दाँतको हो, काठको दाँत, त्रिकोणीय लक गर्ने दाँत स्क्रूको हो;
अन्य बाह्य थ्रेडहरू बोल्टका हुन्।
स्क्रू र बोल्टहरू बीच अपरेशन भिन्नता
१. दुई भागहरू, टाउको र स्क्रू (बाह्य धागोको साथ सिलिन्डर) सम्मिलित एक फास्टनर, जुन नटसँग मिल्नेछ र दुई भागहरू प्वालमा जोडेर जोड्नका लागि हुन्छ। यस प्रकारको कनेक्शनलाई बोल्ट जडान भनिन्छ। यदि नट बोल्टबाट खोलेको छ भने, दुई भागहरू अलग गर्न सकिन्छ, त्यसैले बोल्ट जडान विच्छेदनीय जडानमा पर्छ।
२. मेशिन स्क्रू मुख्यतया आन्तरिक थ्रेडमा प्वाल भएको भाग र बीचको प्वालको प्वालको बीचको भाग बीचको बन्धनको लागि प्रयोग गरिन्छ। ठूलो ड्रिल थ्रेडलाई नट मिलान आवश्यक पर्दैन (यस प्रकारको जडानलाई स्क्रू जडान पनि भनिन्छ र यसलाई छुट्टन योग्य जडान पनि हो; यो पनि पछाडि पछाडि दुई भागको बीचमा बाँध्न नटमा फिट गर्न सकिन्छ। सेटिंग स्क्रू मुख्य रूपमा फिक्स गर्न प्रयोग गरिन्छ। दुई भाग बीच सापेक्ष स्थिति।
Self. सेल्फ-ट्यापिंग स्क्रू: मेशिन स्क्रूको समान, तर स्क्रूमा थ्रेड भनेको विशेष सेल्फ-ट्यापिंग स्क्रूको हो। यो दुई पातलो धातु सदस्यहरूलाई समग्र बनाउनको लागि जोड्न र जडानको लागि प्रयोग गरिन्छ। प्वालहरू सदस्यहरूमा पहिले नै बनाउनु पर्नेछ। शिकंजाको उच्च कठोरताको कारण, ती सदस्यहरूको प्वालमा सिधा स्क्रू गर्न सकिन्छ सदस्यहरूका प्वालहरूमा समान आन्तरिक थ्रेडको गठन गर्न।
Wood. काठ स्क्रू: मेशिन स्क्रूको समान, तर स्क्रूमा थ्रेड भनेको विशेष काठ स्क्रूको हो, जुन धातु (वा भाग) लाई धातु (वा गैर-धातु) भाग जोड्नका लागि सीधा काठको सदस्य (वा भाग) मा पेच गर्न सकिन्छ। एक काठ सदस्य गर्न प्वालबाट। यस प्रकारको जडान हटाउन योग्य पनि छ।